मालालाई चर्चामा ल्याउँने काले दाई…! | Screennepal
मालालाई चर्चामा ल्याउँने काले दाई…!
काठमाडौं, ५ जेठ । १२ जेठबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘पर्व’को आइटम गीत ‘काले दाई काले दाई’ अहिले चर्चामा छ । युटुबमा १ करोडभन्दा बढी दर्शक पाएको यस गीतलाई अधिकांश नेपालीले रुचाएका छन् । यस गीतमा चलचित्रकी नायिका माला लिम्बुले आइटम नृत्य गरेकी छन् । यही गीतले मालाले चर्चा पनि पाइरहेकी छन् ।
तर, चलचित्रको मुख्य भूमिकामा नम्रता श्रेष्ठ, कोशिश क्षेत्री, माला लिम्बु, जेबिका कार्की छन् । टीभी फिल्मी र सुवास इन्टरटेन्मेन्टले मिलेर बनाएको चलचित्रका निर्माता निकिता पौडेल र सुवास गिरी हुन् । चलचित्रलाई दिनेश राउतले निर्देशन गरेका हुन् । जो, मन छुने चलचित्र निर्देशनमा चर्चित छन् ।
चलचित्रको निर्माण यूनिटले आज पत्रकारहरुस“ग भेटघाट गरेको छ । भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नायिका नम्रता श्रेष्ठले आफूहरुले एउटा फरक बिषयमा चलचित्र बनाउने कोशिश गरेको बताइन् । चलचित्रको हिट गीत ‘काले दाई काले दाई’मा नृत्य नगर्दा यो गीतलाई मिस गर्नुभएको त छैन भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘पक्कै पनि छैन । कारण, यो गीतको भिडियोमा मालालाई नै सुहाएको छ । मैले नृत्य गरेकी भए कथावस्तु अर्कै हुन्थ्यो ।’
यस्तै, नायिका माला लिम्बुले आफू डान्सर र नायिका दुबै भएको बताइन् । उनले, चलचित्रको टिम, कथावस्तु, गीतसंगीत सबै राम्रो भएकाले दर्शकले हेर्नुपर्ने बताइन् । नव–नायिका जेबिका कार्कीले भनिन्–‘अहिले हेर्दा नम्रता दिदी र माला दिदीको बिचमा म चेपिए जस्तो देखिएला । तर, चलचित्र चलेपछि भने दर्शकले मेरो कामलाई रुचाउनुहुनेछ ।’
Previous Post‘कमलेको बिहे’को ‘टाकन टुकुन’ (भिडियोसहित) Next Postराजधानीमा खुल्यो कान्तिपुर फिल्म एकेडेमी